cSalaam Xaaji Ismaaciil: “Lacagta Imaaraadku waxa ay aheyd mu’aamarad kadhan ah Soomaaliya (dhegayso) – Radio Daljir
Abriil 12, 2018 1:37 b 1
Aqoonyahan Cabdisalaam Xaaji Ismaaciil oo ah falaanqeeye siyaasadda Geeska Afrika ayaa wareysi uu siiyey Radio Daljir kaga warramay xiisadda sii kordheysa ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta, taas oo cirka isku sii shareertay kaddib markii bilowgii asbuucan Muqdisho lagu qabtay lacag dhan $9.6 Million oo doollar oo ay sidday diyaarad laga leeyahay Imaaraadka Carabta, ayna lacagtaas la wareegtay dawladda Soomaaliya. Dawladda Imaaraadka ayaa dhacdadaas ku tilmaantay fal fool xun oo sharci darro ah.
Cabdisalaam ayaa sheegay in lacagtaasi ay ahayd mu’aamarad ka dhan ah dalka Soomaaliya ayna dawladda DFS ku saxnayd tallaabadii ay qaaday ee ay lacagtaas kula wareegtay, sidaas oo ay tahayna dawladda Soomaaliya looga baahanyahay taxaddar dheeri ah iyo in aysan ku degdegin in xiriirka labada dal uu sii xumaado.
Aqoonyahan Cabdisalaam Xaaji Ismaaciil ayaa u warramay Axmed Sh. Maxamed “Tallman” oo jooga Istudiyeheenna Daljir Bossaso.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 466 Wararka 18311
imaaratul Arab waa dal qaniya isaga inooma BAAHNA anagaa u baahan lacagtaasna waa mushaharkii ciidamada uu tababaro runta waa sidaa